FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu
NgoJanuwari 22, 2014, iijaji ezintathu zeNkundla yeNgingqi yaseTver ziye zajika isigwebo esiwiswe yenye inkundla encinane sokuvala iwebhsayithi ethi jw.org yamaNgqina kaYehova. * Ngokungafaniyo nezinye iinkundla zaseRashiya, le Nkundla yeNgingqi iye yawusebenzisa kakuhle umthetho, yabangela ukuba iinzame zomtshutshisi obefuna ukuvala iwebhsayithi ziwe phantsi.
NgoAgasti 7, 2013, amaNgqina kaYehova aseRashiya atshonelwa lilang’ emini xa inkundla encinane yaseTver (ekummandla oziikhilomitha eziyi-160) kumntla weMoscow yathi i-jw.org mayivalwe, kwityala elathatha nje imizuzu eyi-25. Amagqwetha amaNgqina kaYehova akakhange aziswe ngeli tyala ukuze akwazi ukuziphendulela enkundleni nakwizityolo zomtshutshisi. AmaNgqina kaYehova aliva kumajelo eendaba eli tyala, kwiiyure nje ezimbalwa ngaphambi kokuba livalwe ixesha lokufaka isibheno ngoSeptemba 12, 2013. Ngoko nangoko abhena kwiNkundla yeNgingqi yaseTver.
NgoJanuary 22, 2014, iNkundla yeNgingqi yathi abapapashi bale webhsayithi, iWatchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., abakhange babandakanywe kulo, ngoko kuza kuvulwa ityala elitsha ukuze kuviwe amacala omabini. Umtshutshisi ebexhaswa ngabameli beSebe Lezobulungisa Nelezamakhaya, wacela ukuba inkundla iyivale iwebhsayithi yethu eRashiya ngezityholo zokuba inenkcazelo eyingozi. INkundla yeNgingqi yasikhaba eso sicelo.
Umthetho wenkcazelo eyingozi usetyenziswa kakubi—amaNgqina kaYehova aseRashiya aphathwa kakubi. Ukususela ngo-2009, iRashiya iye ayawusebenzisa kakuhle umthetho wenkcazelo eyingozi kuba wawungabhalwanga wacaca, ngenxa yoko aye aphatha kakubi amaNgqina kaYehova kulo lonke eli. Ngenxa yokusebenzisa kakubi lo mthetho, iRashiya yatsho yakwazi ukuzithethelela kwezi zinto zilandelayo:
Ukuvalela amaNgqina kaYehova angaphezu kwayi-1 600
Ukuyekisa iincwadi zawo eziyi-70
Ukugqogqa amakhaya ayi-171 neendawo anqulela kuzo
Ukuphazamisa iintlanganiso okanye iindibano zawo izihlandlo eziyi-69 ukuza kuthi ga ngoku.
Kwityala ebeliseTver, umtshutshisi wafuna ivalwe iwebhsayithi yethu kuba ineencwadi ezintandathu ekuthiwa ziyingozi. NgoAgasti 7, 2013 iNkundla yeSithili saseTsentralniy eTver yasebenzisa umthetho wenkcazelo eyingozi ukuze ivale iwebhsayithi yethu ize iyifake kwilisti yezinto eziyekisiweyo.
Esi sigqibo sasibaxiwe noko, kuba zange size nesisombululo—ngokomzekelo, bebenokuthi makususwe nje ezi ncwadi kuthiwa ziyingozi kule webhsayithi. Xa iNkundla yeNgingqi yeva ukuba amaNgqina azisuse zonke ezi ncwadi kuthiwa ziyingozi eRashiya, yagweba ngelithi ukuvalwa kwewebhsayithi i-jw.org akukho semthethweni. Esi sigwebo sisame ngolo hlobo, nangona umtshutshisi eneenyanga ezintandathu zokufaka isicelo sokuba siphinde sihlolwe.
Ngaba isigwebo esenziwe yiNkundla yeNgqingqi yaseTver sibonisa ukuba kuza kuba ngcono? AmaNgqina kaYehova aza kube ekujonge ngamehl’ abomvu oko kuza kuthethwa yi-ECHR ngezicelo azifake nxamnye neRashiya.
Usemninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe. Isigwebo esenziwe yiNkundla yeNgingqi yaseTver asihambelani tu nemizamo eyenziwe zezinye iinkundla zaseRashiya zokuxhaphaza amaNgqina kaYehova. IEuropean Court of Human Rights (I-ECHR) iye yazama ukunqanda iRashiya izihlandlo eziliqela ukuba ingawuthinteli umsebenzi nenkululeko yamaNgqina. Endaweni yokusebenzisa izigwebo ze-ECHR, iRashiya isaqhubeka ngokungawaboneli ntweni amalungelo abantu. Ukuze akhusele inkululeko yawo yonqulo, amaNgqina kaYehova anezicelo eziyi-23 ezisedesikeni ye-ECHR ukuze le nkundla iwathethelele kwiRashiya.
IWebhsayithi Ethandwa Ngabant’ Abaninzi
Iindwendwelwa izihlandlo eziyi-40 miliyoni ngenyanga (Abantu abayi: 193 000 000 bafunda inkcazelo ekuyo nyanga nganye)
Ifumaneka ngeelwimi eziyi-325
Uncwadi olukuyo lufumaneka ngeelwimi eziyi-611
Umyinge wezinto ezidawunlowudwa eRashiya nyanga nganye: 724 732
Ngo-2013: Kudawunlowudwe izinto eziyi-1 469 000 zeNtetho yeZandla yaseRashiya (ngevidiyo)
^ isiqe. 2 Isigwebo senkundla besingazukubangela abantu bangakwazi ukungena kule webhsayithi. Kunoko besiza kubangela abasemagunyeni bakwazi ukubek’ ityala bonke abo bayindwendwelayo.